May sa nodorana tokoa ? mifamahofaho ny amin’ilay R 5 may tetsy Ambohidahy | NewsMada
May sa nodorana tokoa ? mifamahofaho ny amin’ilay R 5 may tetsy Ambohidahy
Kila forehitra ny fiara Renault 5 iray teny Ambohidahy, omaly. Mifamahofaho be ihany ny vaovao. Ireo mpanao fihetsiketsehana nanao fitakiana teo amin’ny HCC tokoa ve no nandoro azy ity sa loza tsy nahy toy ny loza rehetra ?
Mifamahofaho ny vaovao momba ny firehetan’ny fiara Renault 5 tsy lavitra ny HCC Ambohidahy, omaly tokony ho tamin’ny 11 ora teo. Nilaza ny olona teny an-toerana fa ireo mpanao fihetsiketsehana no nandoro io fiara io nandritra ny hetsika nataon’izy ireo, omaly. « Efa nisy nanosika avy any io fiara io ka nodoran’ireo olona ireo rehefa teo amin’ny HCC”, hoy ny fanazavana. Nanohy ny tabataba nataony teo an-toerana rahateo ireo mpanao fihetsiketsehana. Niakatra ny afo sy ny setroka tamin’ilay fiara nirehitra.
Tao anatin’ny fotoana fohy anefa, tonga teny an-toerana ny polisy sy ny Emmo/Reg ka niparitaka nitsoaka ireo mpanao fihetsiketsehana. Tonga teny ihany koa ny mpamonjy voina namono ny afo. Niverina amin’ny laoniny ny filaminana taorian’izay. Tsy niverina intsony anefa ireo mpanao hetsika. Tsy nisy ny olona voasambotra tamin’io omaly io.
Misokatra ny fandihadiana manodidina ity fiara nirehitra ity. Nilaza ny avy amin’ny mpitandro filaminana fa anatin’ny fanadihadiana tanteraka izy ireo. Raha endrika fanakorontanana, tsy maintsy hisy ny fisamborana sy ny famotorana hatao.
Amin’ny ankapobeny, raisin’ny olona avy hatrany ho resaka politika ny tranga toy izao. “Fihetsika entina hanakorontanana amin’izao ankatoky ny valim-pifidianana avy amin’ny HCC”, hoy ny olona.
Misy mahazo tombontsoa amin’ny fanakorontanana tokoa eto amintsika? Vao ny herinandro ambony ilay nisy nitoraka grenady tamina tranona mpanao politika. Tsy mbola fantatra izay tohin’ny famotorana. Izao indray, misy ny mikasa hanao fihetsika hafahafa sy hanakorontana. Samy miandry ny valim-pifidianana avokoa ny rehetra ary ao anatin’ny fitoniana izany. Tsy misy mihitsy ny hahazo tombontsoa amin’ny korontana eto amintsika.